EN877 မီးခိုးရောင် Cast သံပိုက်များ၊ သံမဏိအချိတ်အဆက်များ၊ Manhole အဖုံးနှင့် ဆန်ခါများ - Jipeng
EN877 ကာစ်သံပိုက် SML KML BML TML
EN877 ကာစ်သံ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ASTM A888 သွန်းသံပိုက်
ASTM A888 သွန်းသံတပ်ဆင်ပစ္စည်းများ
ပြွန်ဘောင်ခတ်ထားသော သွန်းသံ fttings
Cast Iron Grooved Fittings များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် သရုပ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေပိုက်စနစ်ဆိုင်ရာ အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Shijiazhuang Minmetals and Machinery Export Company အမည်ရှိ 1974 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နောက်ကြောင်းပြန်ခြေရာခံနိုင်သည့် ထိပ်တန်းသွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။1998 ခုနှစ်တွင် Shijiazhuang Jipeng Imp ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။& Expထိုအချိန်က PR China ၏ နိုင်ငံခြားစီးပွား ရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အတည်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ။ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် သတ္တုနှင့် စက်ယန္တရားများ၊ စက်မှုနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကို အထူးပြုပါသည်။အားသာချက်အရှိဆုံးနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသော ထုတ်ကုန်များမှာ အဆောက်အအုံအတွင်းရော အပြင်ဘက်ပါ ရေနုတ်မြောင်းများအတွက် သတ္တုပိုက်လိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ မြူနီစီပယ်စီမံကိန်းများဖြစ်သည်။
1.Cast သံ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း
2. EN877၊ DIN19522၊ ASTM A888၊ CISPI301၊ CASB70၊ ISO6594 အရ အဆောက်အဦအတွက် ရေနုတ်မြောင်းများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် လေဝင်ပေါက်များအတွက် No-hub သံပိုက်များ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် သံမဏိအချိတ်အဆက်များ။
3. မီးငြှိမ်းသတ်ရန်အတွက် Grooved fittings နှင့် couplings များ။
4. ရေပို့လွှတ်ခြင်းအတွက် ပြတင်းပေါက် သံပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ISO2531၊ EN545၊ EN598။
5. Manhole သည် EN124၊ SS30:1981၊ ဆန်ခါများ၊ ကြမ်းပြင်နှင့် အမိုးပေါက်များဆီသို့ အဖုံးများနှင့်ဘောင်များ။
6. နိုင်ငံခြား ဖောက်သည်များ၏ ပုံများ သို့မဟုတ် နမူနာများ အရ အမျိုးမျိုးသော သွန်းလုပ်ခြင်းနှင့် အတုလုပ်ခြင်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ။ပစ္စည်းများသည် ductile, carbon steel နှင့် stainless steel ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
EN877 Hubless Cast Iron ပိုက်များ
ASTM A888 Hubless Cast သံပိုက်များ
Gaskets များဖြင့် Stainless Steel Couplings များ
Ductile သံပိုက်များနှင့် Flanged Fittings
Stainless Steel Casting အစိတ်အပိုင်းများ
1998 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း 20 ကျော်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းရန်၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုင်တွယ်ခြင်းစသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံခြားသားဖောက်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် အတွေ့အကြုံပြည့်၀သောပစ္စည်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံသေထုတ်ကုန်များသာမက နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အမည် သို့မဟုတ် လိုဂိုကို ရိုက်နှိပ်သည့် OEM လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံခြား ဖောက်သည်၏ ပုံများ သို့မဟုတ် နမူနာများ အရ အမျိုးမျိုးသော ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ပုံသွင်းခြင်း အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဖောက်သည်များသည် ဤနေရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် ထိရောက်စွာ ပို့ဆောင်ခြင်းကို ခံစားနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အားသာချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ မတူညီသော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို အပြည့်ထည့်ထားသော ကွန်တိန်နာတစ်ခုထဲသို့ စုဆောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့သည် တစ်ကြိမ်လျှင် ကုန်ပစ္စည်း5မျိုးကိုပင် လိုအပ်ပါသည်။အဲဒါက ဖောက်သည်တွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် တန်ဖိုးရှိသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည် ပေးပို့မှုမြန်ဆန်စေရန် စက်ရုံသို့သွားမည်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်နှင့် အစီရင်ခံစာရေးသားထားသည်။မစုံလင်သောဆောင်းပါးများကို ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ပယ်ချမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီလောက်အောင် ကောင်းမွန်သည့်တိုင်အောင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်အထိ ထုတ်လုပ်သူကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် မြှင့်တင်ရန် တောင်းဆိုပါမည်။
7-Piece Camping Pot Set
Dutch Oven စခန်းချခြင်း။
EN877 Fittings Liquid Epoxy Coated
EN877 BML ပိုက်များ
EN877 KML ပိုက်များ
EN877 TML ပိုက်များ
BS4622 Spigot နှင့် Socket ပိုက်များ
Recessed Manhole အဖုံးနှင့်ဘောင်
Gully Grease ကြားခံကိရိယာ
အကယ်၍ သင်သည် စက်မှုဖြေရှင်းချက် လိုအပ်ပါက... ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေရှည်တည်တံ့သောတိုးတက်မှုအတွက် ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့သည် စျေးကွက်တွင် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
Shijiazhuang Jipeng ပို့ကုန်သွင်းကုန် Co., Ltd.
လိပ်စာ : 133 ZHONGSHAN DONGLU SHIJIAZHUANG PRCHINA
ကျွန်ုပ်တို့၏ သံထည်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး
သွားကြွေလွှာ သို့မဟုတ် မကပ်စေဘဲ သို့မဟုတ် ကြွေမလား။